खाना खाएपछि किन निद्रा लाग्छ ? यस्ताे छ वैज्ञानिक कारण
Fri, Dec 13, 2019 at 9:20pm
प्राय सबैले अनुभव गर्नु भएकाे हाेला टन्न खाना खाए लगत्तै हामीलाई निन्द्रा लाग्छ। खाना खाए लगत्तै धेरैलाई आराम गर्नु पर्ने वा सुत्नु पर्ने हुन्छ ।
केहि मानिसहरूले त खानापछि आराम गर्ने वा केही बेर सुत्ने तालिका नै बनाएका पनि हुन्छन्। कसैलाई प्रत्येक दिन खानालगत्तै निद्रा नलाग्न पनि सक्छ। तर, वास्तविकता के हो भने प्रायःलाई खाना खाएपछि निद्रा लाग्ने गर्छ।
चिकित्सकसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा उनीहरुले खानेबित्तिकै नसुत्न सल्लाह दिन्छन्। यसो गर्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना हुने उनीहरूकाे भनाइ छ । खानालगत्तै निद्रा लाग्ने कारणबारे भने निकै कमलाई जानकारी हुन सक्छ।
तर कतिपय खानेकुरा यस्ता हुन्छन् भनिन्छ, जसले निन्द्रा लगाउँछ। कतिलाई भात खाएपछि निन्द्रा लाग्छ, कतिको मासु खाएपछि आँखा लोलाउन थाल्छ। यस्तो प्रवृत्ति नेपालीमाझ मात्र होइन, विश्व समुदायमा हुने गर्छ।
खाना खाएपछि शरीर बोझिलो अनुभव हुन्छ। निन्द्रा लाग्छ। किन ? विभिन्न अध्ययनहरुले जनाए अनुसार खाना खाएपछि निद्रा लाग्नुको प्रमुख कारण ‘एल-ट्रिपटोफान’ रसायन नै प्रमुख हो। अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार सुँगुरको मासु, अन्डाको सेतो भाग, माछा आदिमा यस्तो तत्व हुन्छ, जसले निन्द्रा लगाउँछ।
टर्कीको मासुमा पनि ‘एल-टि्रपटोफान’ नामक रसायन अधिक मात्रामा रहेको हुन्छ। एल ट्रिपटोफान हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक हुन्छ। खासगरी अनिन्द्रको समस्या भएकाहरुलाई यसको आवश्यक हुने गर्छ।
अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट पाइने खानाको सेवनपछि शरीरमा इन्सुलिन बन्न थाल्छ। र, यसले पनि ट्रिपटोफान निर्माण गर्छ। यो मस्तिष्कमा पुगेपछि सेरोटोनिन बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र मेलाटोनिनका कारण मानिसलाई निद्रा लाग्ने गर्छ।
एक अध्ययन अनुसार शरीरमा ‘एल-ट्रिपटोफान’ कमी भएमा अनिद्रा तथा निद्रा खराब हुने गर्दछ। अनिद्राकेा समस्या भएका मानिसहरुले ‘एल-ट्रिपटोफान’ को सेवन गर्नाले उनीहरुमा अनिद्राको समस्या हटर जाने पनि कुरालाई अध्ययनहरुले समेत सही मान्दै आएको छ ।
यसबाट बनाइएको थुप्रै औषधीहरुले अनिद्राको समस्यालाई समेत हटउदै गएको छ। यस बारेमा गरिएको अनुसन्धान ३० वर्ष भन्दा अगाडी गरिएको थियो। अर्थात, सन् १९८६ मा यो अनुसन्धान गरिएको थियो।
आखिर हो के ‘एल-ट्रिपटोफान’ ?
‘एल-टि्रपटोफान’ एक किसिमको अमिनो एसिड हो। अमिनो एसिड त्यस्तो केमिकल हो, जसबाट प्रोटिनको निर्माण हुन्छ। प्रोटिनबाट शरीरका कोषिकाहरु निर्माण हुन्छ , जुन हाम्रो शरीरको विकास लागि आवश्यक छ। यस अर्थमा ‘एल-ट्रिपटोफान’ हाम्रो शरीरको लागि निकै जरुरी छ तर यो हाम्रो शरीरमा निर्माण हुँदैन। विभिन्न खानेकुराको माध्यमबाट यस्ता तत्व शरीरमा प्रवेश गर्छ।
यही अमिनो एसिडको माध्यमबाट सेरोटिनिन नामक रसायनको निर्माण हुने गर्छ। सिरोटिनिन यस्तो तत्व हो, जसले शरीरमा खुशीको भाव पैदा गर्दछ। यही सिरोटोनिनका कारण झिंगाहरुलाई पनि निद्रा लाग्ने गर्दछ। मानव शरीरमा पनि यही कारण निद्रा लाग्न सक्छ। यद्यपी, यसबारे अहिलेसम्म यकिन भएको छैन।
समाधान छ ?
फुड कोमाबाट बच्न खानाको तौर–तरिकाबारे जानकारी राख्न जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसबाट बच्न खानाको मात्रामा पनि ध्यान पु-याउनुपर्छ।
एकैपटक ठूलो परिमाणमा खाना खानुको सट्टा थोरै–थोरै खाना छोटो–छोटो अवधिमा प्रयोग गर्दा निकै राम्रो हुन्छ।
यसका लागि डाइट पनि सन्तुलित मात्रामा लिँदा राम्रो हुन्छ। जसमा काब्र्सको मात्रा कम र पोषण तत्वको मात्रा बढी हुन जरुरी हुन्छ। खाना खाएपछि आरामसँग कुर्सीमा बस्ने बानी गर्नुहुँदैन।
यसको साटो केही समय टहलिने वा क्रियाशील रहने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा राम्रोसँग खाना पच्नुका साथै रगतमा चिनीको मात्रा पनि नियन्त्रण हुन्छ।